မျိုးဥကြွေခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ - Hello Sayarwon
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 07/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဓမ္မတာကို ပထမဆုံးကြုံဖူးပြီးချိန်မှာ မိန်းကလေးအများဟာ အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်လေး သိသွားကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကို မှန်ကန်စွာ တွက်ဆလိုသူများအဖို့ မျိုးဥကြွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
ဒီဆောင်းပါးမှာ မျိုးဥကြေါခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
၁။ ဓမ္မတာလာချိန်တိုင်းမှာ သားအိမ်ခေါင်းမှ အရည်များ ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။
ဓမ္မတာလာစဉ်မှာ သေချာစွာ သတိထားမိရင် သားအိမ်ခေါင်းမှ ထွက်တဲ့အရည်တွေ ပြောင်းလဲမှုရှိတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အရည်များဟာ ပိုမို စေးကပ်လာပါတယ်။ ကြက်ဥအကာနဲ့ တူလာပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ မတွေ့ရဘဲလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းအရည်ကြည်ကို မတွေ့ရရင် ဒါဟာ မျိုးအောင်နိုင်တဲ့အချိန် မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။
သားအိမ်ခေါင်း အရည်ကြည်ဟာ ကြက်ဥအကာနဲ့ တူနေရင်တော့ ဒါဟာ ကလေးရနိုင်ခြေ အများဆုံးအချိန်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခြေအနေပေါ်လည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ မျိုးဥကြွေချိန်ဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်ဖို့ အထောက်အကူရတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သားအိမ်ခေါင်းအရည်ပြောင်းလဲခြင်းဟာ သုက်ပိုးတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ်။
သားအိမ်ခေါင်းအရည်ကြည်တွေ ပိုမိုစိုရွှဲလာရင် သုက်ပိုးတွေအနေနဲ့ မျိုးဥဆီရောက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာပါတယ်။ သုက်ပိုးနဲ့မျိုးဥ တွေ့ဆုံနေချိန်မှာလည်း သုက်ပိုးကို အကာအကွယ် ပေးပါတယ်။
၃။ မျိုးဥကြွေခြင်းဟာ သားအိမ်ခေါင်းကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အပြောင်းအလဲကတော့ ပိုပြီး နူးညံ့ခြင်း၊ မြင့်တက်ပြီး ကျယ်ပြန့်လာခြင်း၊ ချောမွတ်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းဟာလည်း ပိုပြီး စိုစွတ်ချောမွေ့လာပါတယ်။ ဒါဟာ လိင်မှုဆန္ဒကို ပိုပြီးထက်သန်လာစေပြီး အတူနေချိန်မှာ သာယာမှုကို ပိုပြီးဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ အနံ့ခံအာရုံတွေ ပိုကောင်းလာပါတယ်။
မျိုးဥကြွေချိန်မှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် အမျိုးသမီးများဟာ အနံ့ခံနိုင်ခြင်းဟာ ပိုမိုပြီး အားကောင်းလာပါတယ်။ အရင်က သိပ်မရဖူးတဲ့ အနံ့တွေရလာပြီး အမျိုးအမည် ခွဲလာနိုင်ပါတယ်။ တခြားအာရုံတွေဖြစ်တဲ့ အရသာခံနိုင်ခြင်းနဲ့ အမြင်အာရုံများလည်း မြင့်မားလာပါတယ်။
၅။ မျိုးဥကြွေချိန်မှာ မျိုးဥတစ်လုံးမက ကြွေနိုင်တယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မျိုးဥကြွေချိန်မှာ မျိုးဥတစ်လုံးပဲ ကြွေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာ အမျိုးသမီးတချို့ဟာ မျိုးဥနှစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး ကြွေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ၂မြွှာပူး၊ ၃မြွှာပူးတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဟာ ၂၄နာရီပဲ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပူချိန်ဟာ တက်လာပြီး ပရိုဂျက်စထရုန်း ဟော်မုန်းပမာဏ ပိုမိုမြင့်လာစေပြီး မျိုးဥကြွေခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးပါတယ်။
၆။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးများသောက်ခြင်းဟာ မျိုးဥကြွေခြင်းကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးသောက်ပြီးတဲ့အခါ အီစထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စတင်ဟော်မုန်းများဟာ မျိုးဥကို မကြွေစေဘဲ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဟာ မျိုးဥနဲ့ သုက်ပိုးကို တွေ့ဆုံခြင်း မရှိစေဘဲ မျိုးဥကြွေခြင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
မျိုးဥကြွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိလိုတာရှိရင် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုသိတဲ့ ကုသမှုမှာ ပါဝင်သူများနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ မျိုးဥကြွေချိန်ကို အတိအကျသိရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှ အချက်ပြမှုများပေါ် မူတည်ပြီး လိုက်ပါပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မယ်။
15 Not-So-Fun Facts about Ovulation. http://www.momtastic.com/pregnancy/362579-15-fun-facts-about-ovulation/. Accessed December 9, 2016.
Understanding Ovulation. http://americanpregnancy.org/getting-pregnant/understanding-ovulation/. Accessed December 9, 2016.
Fun Facts about Ovulation.
http://www.cycleharmony.com/stories/fun-facts-and-humor/fun-facts-about-ovulation. Accessed December 9, 2016.